ဂဏန်းခွက်ကြော် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
Scallops နဲ့ ပဲကြာဇံ →
ကျမ အရမ်းကြိုက်တဲ့အစားအစာဆို အိမ်မှာ ခဏခဏလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂဏန်းခွက်ကြော်ကို ကျမစားဖူးတာ ရန်ကုန်က ယောက်လမ်းထဲက ဆိုင်လေးတဆိုင်မှာပါ။ ကျမအကို ဝမ်းကွဲ ကိုကြီးထွန်းက လိုက်ကျွေးဖူးတာပါ။ သူတို့ကလူပျိုအရွယ်တွေဆိုတော့ ခဏခဏသွားမှာပေါ့။ ကျမငယ်ငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ စိတ်လိုလို့ခေါ်တဲ့အခါဆို လိုက်ရတာပေါ့လေ။ ဆိုင်နံမည်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ Mother House ဆိုလား။အဲဒီ ထဲက အရမ်းကြိုက်တာ။ ကြုံရင်လဲ ကြုံသလိုစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရတာပေါ့နော်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ( ၅ခုစာ)
-ဂဏန်းသား ၇၀ ဂရမ်
-မုန်လာဥနီ ဓားနုတ်ပေါက် ၅၀ ဂရမ်
-ကြက်သွန်နီ ဓားနုတ်ပေါက် ၅၀ ဂရမ်
-ကြက်သွန်မြိတ် ပါးပါးလှီး ၁ပင်
– bread crumbs ပေါင်မှုန့်ခြောက်၃ဇွန်း(စားပွဲတင်)
ဂဏန်းအခွံကို ခွါယူပါ။ ဂဏန်းကနေ အသား နွှာလို့ရသလို အသားချည်းပဲ ဝယ်လို့လဲရပါတယ်။ ကျမကတော့အသားချည်းပဲဝယ်ထားတာကိုသုံးပါတယ်ပါ။ အခွံကိုချွတ်ယူပြီး ဂဏန်းကိုဟင်းချက်စားပါတယ်။
ပထမဆုံး ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥတို့ကိုဆီနဲနဲ နဲ့ကြော်ပေးပါ။
၂မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီး ဂဏန်းသားထဲ့ကြော်ပေးပါ။ ၂မိနစ်ခန့်ဆက်ကြော်ပြီးရင် ငရုတ်ကောင်း ကြက်သွန်မြိတ် ရောပါ။ ကြော်ပြီးသားအရောများကိုကြက်ဥ၊ ကော်မှုန့်၊ bread crumbs ပေါင်မှုန့်ခြောက် ၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆားတို့နဲ့ရောမွှေပေးပါ။ အဲဒီအရောကို ဂဏန်းအခွံလေးများထဲဖြည့်ပေးပါ။ အရမ်းပြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ ကြော်လိုက်ရင် အနဲငယ်ဖောင်းကြွလာမှာမို့ပါ။
ဆီပူထဲကို ဂဏန်းအခွံဘက်ကို အောက်ဖက်ထားပြီး ကြော်ပါ။ အပေါ်ကို ဆီပူအနဲငယ်စီ လောင်းပေးပါ.၁မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးရင် ၁ဖက်ကိုလှန်ပြီး မိနစ်ဝက်ခန့်ကြော်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ဂဏန်းခွက်ကြော်ပူပူလေးကို အရသာရှိရှိ နှစ်သက်ရာ အချဉ်ရည်ဖြင့်တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
By eithet • Posted in တရုတ်အစားအစာ, ထိုင်းဟင်းလျာ
4 comments on “ဂဏန်းခွက်ကြော်”
23/04/2013 @ 1:29 am
အလွန်ကြိုက် ကောင်းမှကောင်း ပြင်ထားတာလေး လှပ သန့် ပြန့်~ လူလေးကလဲ စေတနာလှ ချောချောလေး ~ ဘာလိုသေးလဲကွယ် 🙂
26/04/2013 @ 2:02 pm
mother house မဟုတ်ပါ၊ Joy house ဆိုင်ပါ
26/04/2013 @ 11:40 pm
aww , hote . thanksalot naw 🙂
07/05/2013 @ 3:19 am
This food remind me of my young age in back home,I ate this stuff in Rangoon.There isasmall Chinese restaurant.30 or more years ago .Between nay pyi daw cinema hall & stationery shop on sule pagoda rd. I hope is still exit.In here we put it onmussel shell & deep fried.Not easy to find crab shell.Thank you.Thank you.Thank you.